PD3d ၄.၅ mega package အနက်ရောင်ရေဒီယို stack ပြissueနာ?
PD3d ၄.၅ mega package အနက်ရောင်ရေဒီယို stack ပြissueနာ?5လအတွင်း5days ago #1619
gday ကိုယ့် pd747 အတွက်အကြီးစား pakage 400-4.5 အတွက် pd4.5 ကိုစမ်းသပ်ပြီးသားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပဲလား။ ငါက pdXNUMX ထဲမှာ install လုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင် radio stack ကိုပရိုဂရမ်မသွင်းနိုင်ဘူး၊ အမည်းရောင်ရှိပြီးရေဒီယိုနံပါတ်တွေထပ်ထည့်လို့မရဘူးလား။ ဒီအံ့သြဖွယ်အထုပ်တစ်ခု update ကိုအပေါ်စိတ်ကူးများ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်